ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါကာ ကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါကာ ကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ
(၁၃) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါကာ ကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကို စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲအချိန်က နေပြည်တော် Hilton Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးအေးမောင်စိန် ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာခင်ဇော် နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ World Organization for Animal Health (OIE)၊ Four Paws International မှ ကိုယ် စားလှယ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ၊ မြန်မာ နိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် အသင်း ၊ မြန်မာ နိုင်ငံတိရစ္ဆာန် ဆေးပညာကောင်စီ တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ကမ္ဘာတွင် ၁၅ မိနစ်လျှင် လူတစ်ဦးကျ ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွား၍ အသက် ဆုံးရှုံး လျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူဦးရေ ၅၅,၀၀၀ မှ ၇၀,၀၀၀ ခန့် ခွေးရူးရောဂါဖြင့် သေဆုံး လျက်ရှိကြောင်း၊ ခွေးရူးရောဂါသည် အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံ များ၏ ဆင်းရဲသောကျေးရွာ များ တွင် ထိခိုက်မှုပိုမို ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ရောက်တိုင်း တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့၌ ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ရောက်တိုင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန က ကြီးမှူး၍ ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ တစ်ပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများ အဖြစ် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ခွေးများ ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းတို့ဖြင့် ၂၀၃၀ တွင် တကမ္ဘာလုံး၌ ခွေးရူးရောဂါ ဖယ်ရှား သွားနိုင်ရေး မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအား ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွေးရူးရောဂါကူးစက်မှုများဖြစ်ပွားတွေ့ရှိ နေရဆဲ ဖြစ်သည့် အတွက် ခွေးရူးရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားမှု လျော့နည်းလာပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း၊
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူများ ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ရေး အသိအမြင် ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာပြီး အလေ့အကျင့် ကောင်းများ ရရှိလာစေရန်၊ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများ လျော့ပါးစေရန်နှင့် ရောဂါကာကွယ်မှု လုပ်ငန်းများမှာ ပြည်သူလူထုမှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်း ပါဝင် လာစေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊
ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (OIE) မှ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ၏ ခွေးရူး ရောဂါ ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများအား အသိအမှတ် ပြုပံ့ပိုးသည့် အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တို့တွင် ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး အုပ်စုလိုက် ကာကွယ် ဆေးထိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ အားစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ Pilot မြို့နယ်(၃)ခုဖြစ်သည့် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ညောင်ဦး မြို့နယ် နှင့် မှော်ဘီမြို့နယ်များ အပါအဝင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ ခွေးကောင်ရေ (၄၀၀,၀၀၀) ခန့် အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး နိုင်ခဲ့သဖြင့် Pilot မြို့နယ် (၃)ခုတွင် ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှု ၈၀% ကျော် ထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတစ်ကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် FOUR PAWs International အဖွဲ့ကြီးကလည်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ Pilot မြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လယ်ဝေးမြို့နယ်နဲ့ ညောင်ဦးမြို့နယ်များအတွက် ဆေးအဆ (၅၀,၀၀၀) လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ထပ်မံအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း (Booster) လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း။ ထပ်မံပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ “ခွေးကောင်ရေ (၁) သန်းကာကွယ်ဆေးထိုး စီမံချက်” ကို မွေးမြူ ရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနဲ့ Four Paws International အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၌ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ High Risk ဒေသများ တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့် အတွက် များစွာ ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း နှင့် အောင်မြင်စွာကြိုးစား ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် Four Paws International မှ ကိုယ် စားလှယ် က ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ များရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ဧည့်သည်တော်များသည် ကမ္ဘာ့ခွေးရူး ရောဂါကာ ကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအထိမ်းအမှတ် ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးကြသည်။
ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ် ဆေးကို ပထမဆုံးရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သော သိပ္ပံပညာရှင် Louis Pasteur ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၎င်းကွယ်လွန် သည့် စက်တင်ဘာလ(၂၈)ရက်နေ့ ကို ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး နေ့ အဖြစ် ခွေးရူးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ (Global Alliance on Rabies Control) က စတင်သတ်မှတ်ပြု လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ (၂၈)ရက် တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွေးရူးရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ (Global Alliance on Rabies Control) က ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ World Organization for Animal Health (OIE)၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ United Nation Food and Agriculture organization (FAO)၊ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ World Health Organization (WHO) စသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် World Rabies Day ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် Rabies, Educate. Vaccinate. Eliminate “ခွေးရူးရောဂါ ဖယ်ရှားရေး ကာကွယ်ဆေးထိုးကာ ပညာပေး” ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် Rabies: Zero by 30 “ခွေးရူးရောဂါ ကင်းစင် ကမ္ဘာတစ်ခွင် ၂၀၃၀တွင်” ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဆောင်ပုဒ်မှာ Rabies: Share the message. Savealife. “ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ သတင်းစကား မျှဝေကာအသက် ကယ်စို့” ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် RABIES; Vaccinate to Eliminate “ခွေးရူးရောဂါ ကင်းစင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးကြစို့” စသဖြင့် ဆောင်ပုဒ်များ သတ်မှတ်ကာ ခွေးရူး ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး၌ ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ ယခုနှစ်သည်(၁၃) နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ World Organization for Animal Health (OIE)တို့ ပူးပေါင်းပြီး မိတ်ဖက်ဌာန ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ World Health Organization ၊ Food and Agriculture Organization စသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းကြီးများမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအား ဖိတ်ကြားလျက် stakeholder consultation meeting (၃) ကြိမ်ကျင်းပကာ မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် ခွေးရူးရောဂါ လျော့ကျသွားရေးကြိုးပမ်းမှု ၌ အဓိက မဏ္ဍိုင်ဖြစ်လာမည့် “အမျိုးသား အဆင့် ခွေးရူး ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး မဟာ ဗျူဟာမူဘောင်” “National Action Plan for Rabies Elimination in Dog” ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်းမှာ အပြီး သတ်ရေးဆွဲ အတည်ပြု နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နေပြည်တော်ဝန်းကျင်ရှိ ဆည်/ကန်များ၏ နေ့စဉ်ရေမှတ်စာရင်း ၂၈-၉-၂၀၁၉